OEM ee Da'da Fiican ee Da'da iyo Xasaanadda ee Horumarinta Royal Jelly Softgel
[Baakad:] Kartoonka Dhalada
[Waqtiga soo saarista] 25 maalmood
[Faahfaahinta Bixinta] 30 maalmood gudahood ka dib markii la xaqiijiyo amarka
1. Gabowga, wuxuu hodan ku yahay fiitamiinada iyo borotiinada, sidoo kale waxaa ku jira SOD enzyme, waa shey qaali ah oo qurux badan, isticmaalka muddada dheer wuxuu maqaarka ka dhigi karaa mid cas, dhalaalaya
2. Hurdada hagaaji;
3. Qaadashada jelly Royal ahaan cilmi ahaan waxay saameyn weyn ku leedahay atrophic gastritis, bogsashada kadib, boogaha, iyo cudurka beerka;
4. In kor loo qaado xasaanadda aadanaha
5. Ka hortagga cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga;
6. Anti-bararka, xanuunka iyo dhiirigelinta bogsashada dhaawaca;
7. Kor u qaadida cusboonaysiinta unugyada, dib u dhigista hoos u dhaca qanjidhada qanjirada 'endocrine qanjidhada', hagaaji shaqada endocrine, iyo gacan ka geysashada hagaajinta cilladda menopausal.